wadanka afrika ugu quruxda badan - iftineducation.com
wadanka afrika ugu quruxda badan
iftineducation.com – Wax Ka Baro Todobada Magaalo Ee Afrika Ugu Dhaqaalaha Badan Iyo Kala Horayntooda
Todobada magaalo ee ugu dhaqaalaha fiican Afrika
1.Lagos:Wax soo saarka Nayjeeriya ayaa soo koraayey tan iyo 2012 kii iyada oo dhamaadkii sanadkii hore lagu qiyaasay xadiga wax soo saarka ee dalka Nayjeeriya ku dhawaad 594.3 Billion oo dollar.
2.Abidjan:Caasimada dhaqaalaha ee dalka Ivory coast waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu wayn ee ku hadla afka Faransiiska kuna yaala qaarada Afrika.
3.Casablanca:waxa ay ka dhex muuqataa ganacsiga Afirka. waxaana la ogyahay in ay tahay magaaladii ugu horraysay ee maal gashi ka bilawda bartamaha iyo galbeedka Afirka.
4.Jahannesburg:waxa ay ka mid tahay magaalooyinka ugu balaadhan dalka koonfur Afirka waana magaalada 3aad ee qaarada Afriak,waana magaalada 3aad ee qaarada Afirka ugu dadka badan.waxaa ka horaysa uun caasimda Masar ee Qahira iyo magaalada Lagos ee Nigeia.
5.Nairobi:Waa caasimada Wadanka Kenya,waana magaalada dalka ugu balaadhan caasimada aah caan ku ahayn dalxiiska oo kaliya,lakiin intaa waxaa u dheer in ay tahay goob uu ka hanaqaaday ganacsi aad u firfircoon.
6.Addis ababa:Waa caasimada wadanka Ethiopia waxa ay na ku taalaa good istaraatiiji ah badanaana waxaa loo tixgaliyaa in ay tahay caasimada siyaasada ee Afrika waa xarunta midawga Afrika.
7.Kampala:Waa caadimada Wadanka Uganda,waxaa ku nool ku dhawaad in ka badan 2 milyan oo qof waana magaalada dalka ugu balaadhan waxaa lagu tilmaamaa “Jawharada Afrika”Saliida ku duugan Uganda oo la helay sanadkii 2006 dii ayaa dhiiri galiyey maalgashiga,waaxda dalxiiska ayaa ahayd isha ugu wayn ee xaga dhalaale abuurka intii u dhaxaysay 2013 ilaa 2015.
Wax soosaarka Uganda ayaa si wayn usoo kobcaayey laga soo bilaabo sanadkii 2012 kii iyada lagu qiyaasay in uu kurodho sanadkan 2015 ka boqolkiiba 6.3 si uu u cagacageeyo ilaa 26.9 bilyan oo dollar.Habada su’aashu waxa ay tahay maxay wadaagaan magaalooyinkani
A:Baaxada dhulka ay ku fadhiyaan iyo barta a ku yaalaan si waca usoo jiidanaysa malgashadayaasha
Gabdhaha ugu quruxda badan afrika oo somalia kaalinta kowaad ka gashay